२२ जिल्लामा बाढी पहिरोको प्रभाव, कहाँको अवस्था के ?
Tue, Jul 17, 2018 | 01:46:29 NST
काठमाडौं, साउन २८ – बाढी र पहिरोको कारण देशभरको जनजीवन कष्टकरण भएको छ । विभिन्न ठाउँमा १९ जनाको ज्यान गएको छ । ६ जना हराइरहेका छन् ।
नदी तथा खहरे खोलामा आएको बाढी गाउँ पस्दा पूर्वका झापा, मोरङ सुनसरी, सिरहा र सप्तरीका र कपिलबस्तुमा धेरै क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । यस्तै पश्चिमका बाँके, बर्दिया, दाङसहितका जिल्लामा पनि बाढीले जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
तराईका धेरै भूभागमा डुबानको खतरा अझै रहेको भन्दै बाढी पूर्वानुमान शाखाले नदी आसपासका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह गरेको छ । अहिले पनि धेरै ठाउँमा पानी परिरहेकाले पूर्वको झापा, इलाम, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, उदयपुर र धनकुटा, मध्य क्षेत्रको रौतहट, सर्लाही, मकवानपुर, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु तथा पश्चिमको कञ्चनपुर, कैलाली र बर्दियाका नदीमा पानीको सतहले खतराको तह पार गर्नसक्ने भएकाले सुरक्षित भएर बस्न शाखाले आग्रह गरेको हो ।
शाखाका अनुसार मेची, निन्दा, बिरिङ, कन्काई, पथरी, त्रियुगा, बुढी खोला, बागमती, पूर्वी राप्ती, रिउ खोला, विनय खोला, अरुण खोला, तिनाउ, बाणगंगा, मछेली, मोहना, बबई लगायतका नदीमा शनिबार बेलुकासम्म नै उच्च जोखिम छ ।
कुन जिल्लाको अवस्था के ?
बाढीले घर भत्किँदा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ लालापुरमा कमिलाल थारुका १२, ९ र ७ वर्षका छोरीहरुको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । बाढीबाट बच्न बालिकाहरु छतमा बसेको बेला घर नै भत्किएको थियो । प्रहरीका अनुसार कमिलालकी श्रीमती पनि बेपत्ता हुनुभएकोे छ ।
लालापुरकै मकैबारीमा एकजना पुरुषको शव पनि भेटिएको छ । राप्ती सोनारी वडा नम्बर ६ र ७ पूरै डुबानमा परेको छ । बाँकेमा राप्तीनदीमा पानीको सतहले खतराको संकेत पार गरेकाले लक्ष्मणपुर बाँध आसपासका होलिया, बेतहनी, गंगापुर, मटैया, फत्तेपुर, कचनापुर लगायतका गाविसका दर्जनौं गाउँहरु डुबानको जोखिममा परेका छन् ।
बाढीले नेपालगञ्ज, कोहलपुर पनि डुबान परेको छ । कञ्चनपुरको टिकुलीपुर गाउँ डुबानमा परेको छ ।
टेङ्ग्रा खोला र बुढी खोलामा आएको बाढीले सुनसरीको इटहरीमा पाँचजना र तरहरामा एक जनाको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । बाढीले इटहरी गैरी गाउँका माला साह, उहाँकी छोरी सिठी साह, भोजपुर घोरेटार घर भइ इटहरी बस्ने ३ वर्षका रुपेश राई र ८ वर्षकी रुपसनी राईको ज्यान गएको हो । यसैगरी घरमा पानी पसेपछि इटहरी आइतबारेका ईश्वर सुनुवार र तरहरामा नाम खुल्न नसकेका अन्दाजी ७० वर्षका व्यक्तिको पनि ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तीन दिनदेखि परेको लगातारको वर्षाले सर्लाहीको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । सदरमुकाम मलंगवासहित खैर्बा, सिसौट, छटौल, महिनाथपुर, मानपुर, सुदामा, बलरा, भाडसर, अचलगड लगायत दक्षिणी भेगमा दर्जनौ घर डुबानमा परेका छन् । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार वर्षाको पानीले सर्लाहीमा झण्डै सात सय घर डुबानमा परेका छन् । वर्षाको पानीले घर भत्किएर किच्दा धनकौल गाउँपालिका–१ मानपुरका ७५ वर्षीय वृद्ध किशोरी रायको शनिबार ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै सोती खोलाले बगाएर बरहथवा नगरपालिका– १० सीतापुरमा १७ वर्षका राकेशकुमार साहको पनि ज्यान गएको छ । डुबान प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक उद्धार सामाग्री सहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो । चुरे क्षेत्रमा परेको निरन्तरको वर्षाले सर्लाहीको बागमती, लखन्देही, कालिन्जोर, फूलजोर, बाँके, झिम, मनुषमारा जस्ता खोलामा पानीको बहाव उच्च भएको छ । लखन्देही खोलाले धार परिवर्तन गरि गाउँ तर्फ मोडिएपछि पिपरिया जानकीनगर हेमपुर लगायतका गाउँमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।
तीन दिनदेखि भइरहेको वर्षका कारण सिरहाका दर्जनबढी गाउँ डुवानमा परेका छन् । डिमा खोलाको पानी गाउँमा पस्दा कर्जन्हा गाउँपालिका– ६ गौताडीका दर्जनबढी घरहरु डुवानमा परेका हुन् । लगातारको वर्षाका कारण बेचो खोलामा आएको बाढी कल्याणपुर नगरपालिका–४ मा रहेका घरमा पसेको छ ।
वर्षा नरोकिएका कारण स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन् । वर्षाले सिरहा जिल्लाका मिर्चैया, गोलबजार, लहान, सुखिपुरका घर डुवानमा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ । कमला नदीले कटान सुरु गरेकाले बाँध बनाउने काम भैरहेको छ ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका गैरीगाउँमा पहिरोले घर भत्काउँदा एकै परिवारका ४ जनाको ज्यान गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पर्खाल लडेर घर भत्किँदा दुर्गा खड्का, उहाँका छोराहरु अनिष र मनिष तथा छोरी शोभाको ज्यान गएको छ । दुर्गाका श्रीमान् उदयबहादुरलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ ।
मोरङको बक्राहा नुनसरी खोला र लोहन्द्रा खोलाले बगाउँदा मिक्लाजुङ रातमाटेका गंगाराम खतिवडा र केराबारी कुसुमेका मिनबहादुर थापाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाढीले मोरङमा पनि २३ सय घर डुबानमा परेका छन् । विराटनगर विमानस्थल पानी जमेर पोखरी बनेपछि कुनै पनि उडान हुन सकेको छैन । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका, उर्लाबारी, मिक्लाजुङ र केरावारी गाउँपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र पोखरीया, रतुवामाई नगरपालिका, गोविन्दपुर, धनपालथान गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ । गोबिन्दपुर प्रहरी चौकीमा पानी पस्दा प्रहरीहरु नै छतमा बसेका छन् । हरैचामा पक्की पुल नै खोलाले बगाएपछि आवतजावत बन्द भएको छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको गछिया खोलाले पुललाई छोएको छ । बाढीले पुललाई क्षति पु¥याउने खतरा बढेको छ ।
झापाको कनकाई नदी र झिलझिले खोलाले बगाउँदा दुई जनाको ज्यान गएको छ । पाँचजना बेपत्ता भएका छन् । झापा गाउँपालिका– २ की कमला घोर्साइनेलाई कनकाई नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । नदीमा आएको बाढीले आमाछोरीलाई दुबैलाई बगाउँदा छोरी कमलाको ज्यान गएको र आमा बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
झापा गाउँपालिका–२ कै कलिप्रसाद राजवंशीसहित उनको चार जनाको परिवारलाई कनकाई नदीले बगाएको छ । नदीले बगाएर बेपत्ता भएका उनीहरुको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । शिवसताक्षी– १ धरमपुरका २८ वर्षका विजय पाण्डेलाई झिलझिले खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका ईपा पाखाटोलमा पहिरोले पुरिदाँ मिठु दानीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोबाट उद्धार गरिएका अर्का एकजना घाइते छन् । पाखाटोलका कृष्णबहादुर दानीको घर पहिरोले पुरिएको हो ।
बबई नदीमा बगाएको दाउरा झिक्न जाँदा बारबर्दिया नगरपालिका १० का राजेन्द्र थारु बेपत्ता हुनुभएको छ । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका, खैलार बर्गदा क्षेत्रमा बाढीको जोखिम भएकोले उच्च सर्तकता अपनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
सप्तरीको खाँडो, जिता, बिहुल, त्रियुगालगायत नदीमा आएको बाढी गाउँ पसेको छ । तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको कुशहा र बनरझुलाको वस्तीमा जिता नदीको बाढी पस्दा साढे ३ सय परिवार विस्थापित भएका छन् । हनुमान नगर योगिनीमाई नगरपालिकाको मल्हनियाँ टोलको ३ सय १० घर डुबानमा परेका छन् ।
सप्तरीको विकट मानिने गोबरगाढा बस्तीमा सप्तकोशी नदीको पानी पसेका कारण त्यहाँका वासिन्दा डुङ्गा चढेर सुरक्षित स्थानतर्फ जान थालेको प्रहरीले जनाएको छ । सप्तरीको विभिन्न खोलानाला र नदीमा आएको बाढीले तीन हजार घर डुबानमा परेको छ । एक हजार परिवार विस्थापित भएका छन् ।
दाङका खोलाहरुमा आएको बाढीका कारण लमही तुल्सीपुर सडक खण्डमा कुनै पनि गाडी चलेका छैनन् । राप्ती राजमार्गको तुलसीपुर—अमिलीया सडकखण्ड अन्र्तगत विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ ।
बबइ, सिस्नेखोला, कटुवा खोला, गुर्जेखोला, पत्रेखोला र ग्वारखोलामा पानीको वहाव यसबर्षकै उच्च मापन गरिएको छ । राप्ती र बबइमा बाढी आएपछि नदी आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आग्रह गरेको छ । शुक्रबारदेखि परेको पानीका कारण घोराही तुलसीपुर सडकखण्डको मोतिपुरमा कल्भर्ट भत्किँदा सडक यातायात पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । देउखुरीका विभिन्न गाउँ पनि डुबानमा परेका छन् ।
पहिरोले नवलपरासीको दाउन्नेमा सडक पुरेपछि आवागमन अवरुद्ध भएको छ । शुक्रबार राति १० बजेदेखि अवरुद्ध बनेको पूर्वपश्चिम यातायात खुलाउने प्रयास भैरहेको नवलपरासी प्रहरीले जनाएको छ । रातीदेखि नै गाडी बाटोमा रोकिएपछि खानेकुरा र पानी नपाएर भोकभोकै बस्नु परेको यात्रुले गुनासो गरेका छन् ।
वर्षाका कारण गुल्मीको रिडी–रुद्रवेणी–वामीटक्सार सडकखण्ड शनिबार बिहानदेखि अवरुद्ध बनेको छ । मुसिकोट नगरपालिका–६ अन्तर्गत भुवाचिदी नजिकै पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध बनेकोे जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न पहल भइरहेको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ ।
गुल्मीमा एक गोठ पुरिँदा दुईवटा चौपाया मरेका छन् । मुसिकोट नगरपालिका–६ कुर्घास्थित कृष्ण परियारको गोठमा रहेका गोरु र भैँसीको पाडी पहिरोले पुरिएर मरेको जिप्रका गुल्मीका प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्र नेपालले बताउनुभएको छ । वर्षासँगै गएको पहिरोले मुसिकोट नगरपालिका–६ कुर्घास्थित टीका पछाईको पक्की घरमाथिबाट पहिरो खस्दा पछाई परिवार विस्थापित भएका छन् । पानीसँगै आएको पहिरोले उनको घर गोठ जोखिममा परेको स्थानीय व्यापारी ज्ञानहरि सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ ।
पहिरोले मोटरसाइकल च्यापिँदा पाल्पाको तानसेन टक्सार टोलका गृहपति शाक्यको ज्यान गएको छ । वर्षाले रामपुर नगरपालिका– १० मा एक घर पुरिएको छ भने दुई घर जोखिममा परेका छन् । कालीगण्डकी करिडोरको आडैमा रहेको दुर्गा मन्दिर टोलमा रहेको छमबहादुर आलेको घर पुरिएको हो ।
कालीगण्डकी करिडोरको बाटोमा खनिएको कच्ची नाली बाढीले भत्काउँदा घर पुरिएको स्थानीय बासिन्दा दामोदर तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । बाढीले घर पुरिएपछि आलेको परिवार अहिले आफन्त र छिमेकीको शरणमा बसेका छन् ।
यस्तै देवनाथ अधिकारी, भोलानाथ पाण्डेय र आनन्द पाण्डेको घर जोखिममा रहेको छ । कालीगण्डकी करिडोरले कच्ची नाली निर्माण गरेका कारण यहाँ क्षति हुन पुगेको हो । करिडोरको बाटोमा झण्डै पाँच मिटर चौडाइदेखि १० मिटर गहिराइसम्म पानीले खोलेको छ ।
दुई दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण चितवनको माडी नगरपालिकामा रहेको रिउ खोलामा आएको बाढीले दुई सयवटा घर डुबानमा परेका छन् । बाढीकै कारण इलाका प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, बघौडा अस्पताललगायत सरकारी कार्यालयसमेत डुबानमा परेका हुन् ।
माडी नगरपालिका वडा नं १, २, ४ र ६ का पूरै तथा वडा नम्बर ३ र ४ का केही भाग डुबानमा परेका छन् । बाढीले कुन्तिपुरमा दुई कच्ची घर ढलाएको तथा घरका खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत सामग्रीमा क्षति र्पुयाएको छ । ठूलो मात्रामा धान खेत डुबाएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार माडी–ठोरी हुलाकी सडकको चितई खोलाको पुल बाढीले ढल्काएपछि सडक अवरुद्ध भएको छ । त्यसैगरी बरुवा बजारबाट लक्ष्मुनिया क्षेत्र जाने डाङ्ग्रे खोलाको पुल पनि बाढीले क्षति र्पुयाएपछि यो सडक पनि अवरुद्ध बनेको उहाँले बताउनुभयो ।
धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४ हिन्दुङमा पहिरो जाँदा एउटा घर पुरिएको छ । पहिरोका कारण विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीसहितको पूरै गाउँ विस्थापित भएको छ । गाउँतलबाट पहिरो जाँदा घरहरु लड्न लागेको अवस्थामा छन् । यस्तै गाउँको बिचबाट बगेको खोलाले कुनैपनि बेला बगाउन सक्ने खतरा रहेको छ । पहिरोले हिन्दुङका पाल छिरिङ तामाङको घर बगाएको हो । ३४ घर रहेको हिन्दुङ गाउँ बिस्थापित भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र पञ्जियार थारुले बताउनुभयो । १० घर पहिरो नजिकै रहेकाले अति जोखिमको अवस्थामा छन् ।
यो गाउँका केही छिमेकी गाउँमा बस्न गएको र केही नातेदारको घरमा बसेको स्थानीय बासिन्दा विजय तामाङले टेलिफोनबाट जानकारी दिनुभयो । हिन्दुङमा रहेको हिन्दुङ आधारभूत प्रावि र हिन्दुङ स्वास्थ्य चौकी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकोले बन्द भएको छ ।
वर्षाका कारण इलाम सदरमुकामस्थित नारायणस्थानमा एक परिवार विस्थापित भएका छन् । सडकको तल्लो भागमा रहेको दुई तले घर भत्कदा भाडा लिएर बस्दै आएको परिवार विस्थापित भएको हो । पानीका कारण घर बस्न नमिल्ने गरी त्किएको छ ।
यस्तै चुलाचुली गाउँपालिका–१ स्थित सागर आधारभुत विद्यालय पहिरोले पुरेको छ । नजिकैको कमल खोलाले जमिन कटान गरेपछि पहिरो झरेको थियो । दुई वटा भवन भध्ये एउटा भवन भत्किएकाले पठनपाठनमा समस्या भएको विद्यालयले जनाएको छ ।
कमल खोलाको बाढी नघटेकाले अर्को भवनमा पनि जोखिम बढेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । वर्षा निरन्तर रहेकाले अधिकांश खोलानाल बढेकाले आसपास क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ । यता सुर्योदय नगरपलिका स्थित फिक्कल स्वास्थ्य केन्द्रको भवन नजिकै समेत पहिरो गएको छ ।
अबिरल वर्षाका कारण महोत्तरीका दुई मुख्य पक्की र ४० वटा ग्रामीण सडकसहित ४२ वटा सडकमध्ये ४१ वटा सडक अवरुद्ध भएका छन् । तीन/चार दिनदेखि लगातार भइरहेको वर्र्षाका कारण सडक बिग्रिएपछि जिल्लामा रहेका ४० ग्रामीण सडक र दुई मुख्य पक्कीसहित ४२ वटा सडकमध्ये ४१ वटा सडक अवरुद्ध भएका छन् ।
लगातारको वर्षाका कारण मुख्य पक्की सडक जलेश्वर जनकपुरसहित ग्रामीण सडक मटिहानी जलेश्वर परिक्रमा सडक, भिठ्ठामोड जलेश्वर सडक, मटिहानी जनकपुर रामजानकी पथ, जलेश्वर हर्दी हुलाकी सडक, जनकपुर लोहारपट्टी सडक खण्डको यातायात सेवा पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ भने स्थानीय बासिन्दालाई निक्कै कष्ठ भएको छ ।
महोत्तरीको दुई गाउँका १७ परिवार विस्थापित भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीकाअुनसार लगातारको वर्षाका कारण जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका – ४ पासवान टोलमा स्थानीय वृहस्पति पासवान, नथुनी पासवान, दिनेश पासवान, मला पासवान र पिपरा– २ का इब्राहिम राईनका घर पूर्ण रुपमा ढलेर विस्थापित भएका छन् ।
त्यस्तै लगातारको वर्षाकै कारण जिल्लाको सम्सी गाउँपालिका– ४ गँैंढाभेटपुरमा १२ घर मुसहर र दुसाध विस्थापित भएका छन् । गाउँभन्दा दक्षिणपट्टी एउटा साने टोलमा स–साना छाप्रा बनाएर बसिरहेका उनीहरुको घर÷घरमा बर्षाका पानी पसेर– चार जनाको घर भत्किएको र अन्य सबै जनाको घरको सबै सरसामान डुबानमा परेको स्थानीय बासिन्दा ललन झाले बताउनुभयो ।
अविरल वर्षाका कारण जनकपुर उपमहानगरपालिका जलमग्न भई यहाँका घर घरमा पानी पसेको छ । पानीको निकास हुन नसकेकाले मुख्य सडक जलाशयमा परिणत भएको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजनाले नाला निर्माणमा गरेको ढिलाइ र लापर्बाहीले गर्दा पानीको बहाव बन्द भई प्रजिअ, सुरक्षाकर्मी आवास परिसर, राष्ट्रिय समाचार समिति, आन्तरिक राजस्व, हुलाक, परिवार नियोजन, महिला विकास, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अञ्चल प्रहरी कार्यालय परिसर डुबानमा परेका छन् ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा दुई फिटभन्दा अधिक पानी जमेको छ भने हुलाक कार्यालयका कोठामा पानी पसेर कागजातलाई भिजाएको छ । अञ्चल अस्पतालमा पानी जमेका कारण बिरामीले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । यहाँका नालाका पानीले परिसर दुर्गन्धित भएको छ ।
लगातार परेको पानीका कारण खोलानाला बढेपछि जाजरकोटका दर्जन ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । विद्युत् उत्पादका लागि ल्याइएको पानीको नहर भत्किएपछि विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । लाखौँ रकम खर्चेर निर्माण गरेका विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि स्थानीय बासिन्दा अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका –३ करुवास्थित भेरीखोला चिलिखोलेसा लघु जलविद्युत योजनाको नहर बगाएपछि विद्युत् सेवा ठप्प भएको छ । कुशें गाउँपालिका– २ मा रहेको झण्डै रु एक करोड ४० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको खाराखोला लघु जलविद्युत् आयोजना पनि अवरुद्ध भएको छ । झण्डै ३६ किलोवाट विद्युत् खपत क्षमता भएको सो लघु जलविद्युत् आयोजनाको कुलो बाढीले भत्काएसँगै चारसय घरधुरीका स्थानीय बासिन्दाले अध्याँरो झेल्नुपरेको कुशें गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो ।
गोदावरी खोलामा आएको बाढीका कारण ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेका छन् । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका तथा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका खोला किनारका वस्ती डुबानमा परेका हुन् । बिहान गोदावरी र फुल्चोकी आसपासमा ठूलो पानी परेपछि गोदावरी खोलामा बाढी आएको हो । बाढीले गोदावरी तथा लुभु क्षेत्रमा कटान पनि गरेको हो ।
पहिरोको जोखिम बढेपछि गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–१ मान्वु स्याम्चेतका ६६ भन्दा बढी घरधुरी विस्थापित भएका छन् । गाउँभन्दा माथिबाट पहिरो खस्न थालेपछि उनीहरु गाईवस्तु र आवश्यक लत्ताकपडासहित सुरक्षित ठाउँमा सरेका हुन् ।
धेरैजसो आफन्तकोमा गएर बसेका सो वडाका सदस्य आशबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । गाउँभन्दा माथिको स्थानीय सामुदायिक वनको भिरबाट बिहीबारदेखि नै सुख्खा पहिरो खस्न थालेको उहाँको भनाई छ । पहिरोमूनिको बस्तीमा १ सय ५० भन्दा बढी घरधुरीको बसोबास भए पनि बढी जोखिममा परेका घरपरिवार विस्थापित भएका हुन् ।
२०७२ सालको गोरखा भूकम्पका कारण बस्ती माथिको ठूलो क्षेत्रको जमिन चिरा परेर धाँजा फाटेकाले पहिरोको झन् धेरै जोखिम बढेको गुरुङले बताउनुभयो । पानी परिरहेकाले पहिरो खस्ने क्रम पनि जारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पहिरोको जोखिममा परेको वस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि सघाउन मान्बु प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली खटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र वस्नेतले बताउनुभयो । पहिरोको जोखिम कायम रहेकाले सो ठाउँका झण्डै ९० घरधुरीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने वडा सदस्य गुरुङले बताउनुभएको छ ।